नेपाली पब्लिक बिहिबार, असार २६, २०७६ १३:०२
- अनारसिंह कार्की
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कुन बेलामा के बोल्ने भन्ने समयको चयन सामान्य हुने गर्दैन। हालै उनले म १६ महिनापहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबैले मास्क लगाउँथे, अहिले मास्क लगाउने कोही छैनन् भनेछन्। उनको यो भनाइ यस्तो बेलामा आयो, जुन बेला ६ दिनदेखि काठमाडाैँको फोहोर नउठेर शहरै दुर्गधित भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ पानीजहाज र रेलको कुरा यसरी गरे कि त्यसैले उनी हास्यपात्र बनेका छन्। खाना पकाउने ग्यास नपाएर हैरान भएका बेलामा घरघरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पुर्‍याउने कुरा गर्छन्। ओली हरेक कुरामा यस्तै कुरा गर्छन्, जसले गर्दा आलोचनाको पात्र हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालको बहुचर्चित निर्मला बलात्कार हत्या काण्डमा सबैभन्दा शंकास्पद बम दिदीबहिनीका पक्षमा उनी बोल्न पुगे, जसले गर्दा त्यो काण्ड झन् जटिल बन्न गयो। भ्रष्टाचारीलाई नसहने कुरा गरे तर वाइडबडीमा रवीन्द्र अधिकारीलाई र बालुवाटार जमिन काण्डमा आफ्ना महासचिवलाई छानबिनअघि नै निर्दोष घोषणा गरिदिए, जसले गर्दा यी दुवै काण्डको छानबिन निष्पक्ष हुुन्छ भन्ने कुरा शंकास्पद बन्न पुग्यो। उनका मन्त्रीहरूका भनाइ र अभिव्यक्तिले त झन् आगोमा घ्यूको काम गर्ने गरेको छ। अन्यथा आजका आम मानिसलाई पनि के थाहा छ भने हाम्रो देशमा जल यातायातको सम्भावना अत्यन्त कम छ। त्यसैले सीमित सम्भावनाहरूको उपयोगमा नै चित्त बुझाउनु हाम्रो बाध्यता हो। जहाँसम्म रेलको प्रश्न छ, हाम्रोजस्तो सीमित साधनस्रोत भएको देशले एकैचोटि यति ठूलो लगानी गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले रेल भनेको ग्लोबल विकासक्रममा हुँदै जाने विषय हो, त्यसका निम्ति धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रोजस्तो देशले आफ्नो हैसियत र क्षमताभन्दा बढीको उपलब्धि खोज्न थाल्यो भने ठूला देशहरूको सामरिक र आर्थिक स्वार्थको भूमरीमा फस्न पुगिन्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
भ्रष्टाचारीलाई नसहने कुरा गरे तर वाइडबडीमा रवीन्द्र अधिकारीलाई र बालुवाटार जमिन काण्डमा आफ्ना महासचिवलाई छानबिनअघि नै निर्दोष घोषणा गरिदिए, जसले गर्दा यी दुवै काण्डको छानबिन निष्पक्ष हुुन्छ भन्ने कुरा शंकास्पद बन्न पुग्यो।
नेपालजस्ता देशका आम मानिसले बुझ्नुपर्छ, बुझेका पनि छन् र सरकारले पनि बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ कि हामीसँग भएका सीमित साधनले एकैपटक असीमित आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारको क्षमता र इमानदारीको कसी पनि उसको प्राथमिकताको चयन र योजनाबद्ध रूपमा साधनको अधिकतम उपयोगको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको विरोध यो १६ महिनामै चूलाचूलामा ग्यास पाइप, पानीजहाज र रेल ल्याइदिएनन् भनेर भइरहेको छैन। बरु ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो कुराचाहिँ ठूलाठूला गर्ने कामचाहिँ अर्कोतिर गर्ने ओलीको बोली र व्यवहारले गर्दा आम जनतामा विरोध, निराशा र आक्रोश बढेको हो। सरकारको अहिलेको विरोधको मूल कारण भनाइ र गराइमा कुनै सामञ्जस्यता नदेख्नु नै हो। त्यसै पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार असीमितजस्तै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफूले गर्नुपर्ने काम र पुर्‍याउनुपर्ने रेखदेख ठीकसँग गर्न नसकिरहेको स्थितिमा अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा किन ल्याउनु पर्‍यो? त्यसरी प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएपछि ती अझ प्रभावकारी भएका छन् कि झन् प्रभावहीन? उनका मन्त्रीले पैसा मागेका कारण इटालियन ठेकदारले काम छडेकाले तीन महिनामा सम्पन्न‍ हुन लागेको मेलम्ची खानेपानी दुई वर्ष पछि धकेलिन पुगेको जवाफदेही को हो? आम मानिसले यस्ता कुराको चित्तबुझ्दो उत्तर खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले गर्ने समर्थन र विरोधका आधारहरू पनि यी र यस्तै हुने गर्छन्। यतिबेला काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशैभर खानेपानीको हाहाकार छ। असुरक्षा र दण्डहीनता बढेको छ। कुनै कारणविनै उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र अनियमितता वडा तहसम्म विस्तार भएको छ। यस्ता खराबी र नराम्रा कामहरू बहुमतको सरकार बनेपछि झन् बढ्दै गएकाले जनता आक्रान्त छन्।
कथित हाम्रो कृषिप्रधान देशमा यो असार महिना हो, बाली लगाउने यो समयमा कृषक एकातिर खडेरीको मार भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर मल, खाद र बीउको अभावले आक्रान्त छन्। तर, सरकार यही बेलामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड आयोजना गर्न लागिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरू यस्ता असरल्ल भएका र हुँदै गएका विकृति, विसंगतिलाई बुझ्न र निवारण गर्नतर्फ होइन, ओठे जवाफ दिनेतर्फ मात्रै लगेका छन् र जनताको आक्रोशका कारण यो पनि हो। कथित हाम्रो कृषिप्रधान देशमा यो असार महिना हो, बाली लगाउने यो समयमा कृषक एकातिर खडेरीको मार भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर मल, खाद र बीउको अभावले आक्रान्त छन्। तर, सरकार यही बेलामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड आयोजना गर्न लागिरहेको छ। यो तिनै कम्युनिष्टको सरकार हो, जसले भारतीय फिल्म बहिष्कारको नारा लगाउने गथ्र्यो। यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा मात्रै झन्डै अढाइ करोड खर्च भएको देखिन्छ तर एउटा छिमेकी चीनको भ्रमणबाहेक उनको जम्बो भ्रमण टोलीको उपलब्धि शून्य देखिन्छ। त्यति ठूलो भ्रमण जमात लिएर भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता देशको भ्रमण होस् वा हालै उनले गरेको स्विजरल्यान्ड, ब्रिटेन र फ्रान्सको भ्रमण होस्, यो निरर्थक र देशको साधनको दुरुपयोग हो भन्ने आम धारणा पाइन्छ। यतिबेला नेपाली समाजमा धर्म परिवर्तनले ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ। यसले नेपालको भूराजनीति र सामरिक रूपमा समेत समस्या खडा गर्ने खतरा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एशिया प्यासिफिक फेड्रेसन नामको विवादास्पद धार्मिक संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएकाले जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली एउटा सम्मान लिनका लागि देशको सम्पत्ति खर्च गरेर कोस्टारिकाजस्तो देशमा गएको कुरालाई पनि जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन्। यस्तो सरकारको रबैयाबाट असन्तुष्ट आम मानिसका अगाडि जब सरकार मानवअधिकारलाई संकुचन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने र धर्मसंस्कृति र परम्परालाई समाप्त पार्ने एकपछि अर्का विधेयकहरू ल्याउन थाल्छ तब जनताको आक्रोश झन् बढ्नु स्वाभाविक हो।
यो कस्तो इन्काउन्टर हो, सरकारबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। यही असार १६ गतेको घटना हो, सर्लाहीमा भइरहेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीको गोली टाउकोमा लागेर एउटा मानिसको मृत्यु भएको छ। यो प्रहरीको कस्तो गोली चलाउने तालिम हो, भीड नियन्त्रण गर्न चलाएको गोली खुट्टामा नलागेर टाउकोमा लाग्ने?
नेकपाको पूर्णबहुमत र अहिले दुई तिहाइको सरकारको यो समयमा गैरन्यायिक हत्या बढ्दै गइरहेको छ। कुनै अपराधका आरोपीलाई होस् कि भीड नियन्त्रण गर्ने नाममा होस् वा कुनै राजनीतिक समूहलाई आपराधिक समूह भन्दै प्रतिबन्ध घोषणा गरेर त्यसका कार्यकर्तालाई प्रहरीले इन्काउन्टरको अभियान नै चलाइरहेको छ। यो कस्तो इन्काउन्टर हो, सरकारबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। यही असार १६ गतेको घटना हो, सर्लाहीमा भइरहेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीको गोली टाउकोमा लागेर एउटा मानिसको मृत्यु भएको छ। यो प्रहरीको कस्तो गोली चलाउने तालिम हो, भीड नियन्त्रण गर्न चलाएको गोली खुट्टामा नलागेर टाउकोमा लाग्ने? प्रधानमन्त्री ओली किन यसरी बारम्बार कुरो एउटा काम अर्कै गरेर जनतालाई आक्रोशित बनाउन लागिरहेका छन्? उनी नेपाली जनताले मात्रै मन नपराउने काम गरिरहेका छैनन्। कतिपय उनका काम र गतिविधिले चीन र भारतजस्ता हाम्रा ठूला छिमेकीलाई पनि शंका लाग्ने काम भएका छन्। यसरी आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टिलाई व्यापक बनाएर अशान्ति सिर्जना गर्ने कामका साथै छिमेकीलाई समेत शंका गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर सरकार के हासिल गर्न खोजिरहेको छ? गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। जे होस्, देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि कामको बोझ स्वाभाविक रूपमा बढी छ। उनको शारीरिक स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने आम नेपालीले बुझेकै कुरो हो। नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा झन्डै १८ करोडको उनको जीवन हो। ओलीलगायत स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सुजाता जोष्ट, विजय गच्छदारजस्ता नेपाली नेताहरू हजारौँ हजार नेपाली जनताको आयु खोसेर बाँचेका थिए वा बाँचिरहेका छन्। यसरी बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको पनि समय समयमा जाँच हुन जरुरी छ। किन कि शारीरिक स्वास्थ्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्छ भन्ने कुरालाई शरीर विज्ञानले पुष्टि गर्छ।
यसरी बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको पनि समय समयमा जाँच हुन जरुरी छ। किन कि शारीरिक स्वास्थ्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्छ भन्ने कुरालाई शरीर विज्ञानले पुष्टि गर्छ।
अन्यथा पूर्ण बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएका ओली किन आम मानिसले मन नपराउने र देशको अस्तित्वमाथि समेत संकट आउन सक्ने काम गरिरहेका छन्? स्वाभाविक रूपमा उनको अंग फेरेको शारीरिक अवस्थाका कारण उनको मानसिक अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ कि त उनी नेपालका विरोधीहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपालमाथि ठूलो संकट र खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयासमा लागेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। तर, जुनसुकै कारणले होस् नेपाललाई ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ, समयमै सजग र सचेत नहुने हो भने।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २६, २०७६ १३:०२